ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မူသောခရစ်တော် | The God-Forsaken Christ! | Real Conversion
ဇန်နာဝါရီလ ( ၂၄ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။" (( မဿဲ ၂၇း ၄၆ ) )
တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်၌ တရားဒေသနာဟောကြားသောအခါ လူငယ်များကို ပြောလေ့ရှိ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို တခါတလေမျှမ ကြားဖူးသောသူရှိကြသောကြောင့် ထိုသို့ပြောရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးများ၊ ကော လိပ်များ၊ နှင့် လူငယ်များစုရုံးတတ်ကြသည့် အခြားနေရာများကို သွားကြပြီး ဘုရားကျောင်း လာရန် ခေါ်ဖိတ်လျက်ရှိကြသည်။ သင်လည်း ရောက်ရှိလာသည်။ သင်သည် ထိုသို့လုပ် ဆောင်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်တိုင်းတွင် လူငယ်လူရွယ်များအား ပြောရသည့် အခြားအကြောင်း ရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဒုတိယအကြောင်းရင်းမှာ အသက်သုံးဆယ်အောက်လူငယ်များသည် အ သက်ကြီးသောသူများထက် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို တွေ့ကြုံကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်လေ့လာ ဖတ်ရှုသမျှသောအရာက ထိုအကြောင်းကို ပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံက ထိုအချက်မှန်ကန်သည်ကို ပြသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဆို လျှင် ဆယ့်ခြောက်နှစ်နှင့်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အများကြီးမဟုတ်သော်လည်း ခြွမ်းချက်တော့ရှိပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာကို အဘယ်သို့ရှင်းပြနိူင်မည်နည်း။ ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ လူငယ် များက ဘဝသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည်ဟု စတင်သတိပြုမိလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ခဏတာနေရသောသူ၊ တစ်နေ့သေရလိမ့်မယ်ဟူသောအချက်ကို စတင်သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လောကကြီးသည် ကြောက်လန့်စရာကောင်းပြီး တခါတရံအထီးကျန်ဆန်လွန်းသည် ဟု စတင် မြင်တွေ့လာပေမည်။ သွေးရူးသွေးတန်းအပြုအမူမျိုးဖြင့်နှင့်အမျိုးမျိုးသောလွှဲပြောင်းမှုဖြင့် မျက် နှာလွှဲရန် သင်မသင်ယူသေးပါ။
လူငယ်များသည် အသက်အရွယ်စတင်ရရှိလာသောသူများအနေဖြင့် ဘဝကို အခုပင် စတင်ခဲ့ကြသည်။ သင်တို့အများက မိမိကိုယ်ကိုမေးနေကြသည်။ "အေးတိအေးစက်ဖြင့် အ ဘယ်သို့အသက်ရှင်မည်နည်း။ မေတ္တာမရှိဘဲ အထီးကျန်နေသော လောကကြီးတွင် အဘယ် သို့အသက်ရှင်ကြမည်နည်း။" ကျွန်ုပ်သည် အထီးကျန်ဆန်ခြင်းအကြောင်းအရာထဲသို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရောက်ရှိလာပါသည်။ အထီးကျန်ခြင်းအကြောင်းအရာက လူငယ်တိုင်းကို တောင်းပြန်မှု မပြုသည်ကို သိသည်။ ထိုလှည့်စားမှုများက သင်ယူလေ့လာထားသူများသည် ကျွန်ုပ်၏တရား ဒေသနာကို စိတ်ဝင်တစားရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သိပါသည်။ တိတ်တိတ်နေသောကောင်း လေးနှင့်အတွေးများသော ကောင်မလေးလည်းရှိသည်ကို ငါသိသည်။ အိမ်ပြန်ပြီး အဘယ်သူ နေမည်နည်း။ "ထိုအသက်ကြီးသူက ကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောသည်။ ပြန်သွားပြီး သူတရားဟော သည်ကို တဖန်နားထောင်ရမည်။"
ဒီနေ့မနက် ကျွန်ုပ်စကားပြောဆိုနေသည်မှာ ထိုလူငယ်ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းက လေးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာမှာ အထီးကျန်ခြင်းတည်းဟူသော အေးတိအေးစက် ဖြစ်ခြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ နှလုံးကြေကွဲစေသည့် အထီးကျန်ခြင်းတို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အော်ဟစ်သောအခါထက် ကောင်းစွာဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိခဲ့ဖူးပါ။ ခံစားခြင်းလည်းမရှိကြပါ။
"အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။" ( မဿဲ ၂၇း ၄၆ ) )
စိတ်နှလုံးထဲတွင် သူ့ပုံကို မြင်ယောင်ပါ။ သူသည် ဆုတောင်းနေစဉ်၊ ဂေတရှေမာန်ဥ ယျာဉ်ထဲ၌ တစ်ဦးတည်းနေ နေစဉ် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ သူ၏ဝတ်လုံတော်ကို ဆုတ်ဖြဲပြီး သူကို သေလုမတတ်ရိုက်ကြသည်။ ခေါင်းပေါ်တွင် ဆူးရစ်သရဖူကို ဆောင်စေကြသည်။ လမ်းပေါ်က နေ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်ခြင်းခံရသောသူကို ပြက်ရယ်ပြုလှောင်ပြောင်ကြသည်။ သူတို့ သည် ကားတိုင်ကိုထောင်ကြသည်။ သူ၏ခန္ဓာကိုသည် မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရပြီး ပြယ်ရယ်ပြု သောစကားများဖြင့် အော်ဟစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူက ဤသို့အော်ဟစ်သည်။
ထိုအော်ဟစ်ခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် မေးခွန်းနှစ်ခုကို အဖြေပေးရမည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ဤယေရှုကား အဘယ်သူနည်း။
သူသည် သာမန်လူတန်းစားမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက "ဘုရားသခင်သည် တစ်ဦး တည်းသောသားကိုပေးတော်မူသည်" ဟု မိန့်တော်မူသည်။ (ယောဟန် ၃း ၁၆ ) ယခုအော် ဟစ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဤသို့ဆိုသည်။
"အိုအဘ၊ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ အထံတော်၌ အကျွန်ုပ်ခံစားသော ဘုန်းအသရေနှင့်ယခုတွင်လည်း အကျွန်ုပ်ကို အထံတော်သို့ချီး မြှောက်တော်မူပါ။" ( (ယောဟန် ၁၇း ၅ ) )
လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအော်ဟစ်သောဤလူသည် သုံးပါးတစ်ဆူ၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ် ယေရှုခရစ်ပေ တည်း။ ထို့သို့ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်နှင့်အတူပေါင်းစည်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
"ငါသည် ခမည်းတော်နှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်မူသည်။" ( (ယောဟန် ၁၀း ၃၀ ) )
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်ယေရှုခရစ်တို့၏ပေါင်းစည်းခြင်းသည် အတိတ်ကစ၍ ထာဝရကာလတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ဖြစ်သည်။
"အစအဦး၌ နှုတ်ကပါတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပါတ်တော်သည် ဘု ရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပါတ်တော်သည်လည်း ဘုရားသ ခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုနှုတ်ကပါတ်တော်သည် အစအဦး၌ ဘုရား သခင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ ထိုနှုတ်ကပါတ်တော်သည် ခပ်သိမ်း သောအရာတို့ုကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်း လွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာ တစုံတခုမျှမရှိ။"( (ယောဟန် ၁း ၁-၃ ) )
“"နှုတ်ကပါတ်တော်သည်လည်း လူ့ဇာတိကိုခံယူ၍၊ ငါတို့တွင် တည်နေတော်မူသည်။" ( (ယောဟန် ၁း ၁၄ ) )
ယေရှုသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် သောယေရှုသည် လောကတွင် အသက်ရှင်တော်မူသည်။ သို့သော် သူသည် လောကအသက် တာတွင်လည်း ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်ပေါင်းစပ်လျက်ရှိသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ တပည့် တော်များအိပ်နေစဉ်တွင်ပင် ယေရှုသည် ဆုတောင်းပြီး ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာ ရဖွဲ့လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် ဖမ်းဆီးခံရပြီး မကောင်းဆက်ဆံသောအခါတွင်လည်း ဘုရားသ ခင်သည် သူနှင့်အနီးကပ်ရှိနေသည်။ သူ့ကိုရိုက်နှက်ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်သတ်ခံရ သောအချိန်တွင်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်ထံသို့လှည့်ပြီး ဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။
"အိုအဘ၊ သူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ကိုပြုသော အမှုကိုမသိကြပါ။" ( (လုကာ ၂၃း ၃၄ ) )
"မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍၊ သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင် မြေတပြင် လုး၌ မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏။ သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရှာဗခသာနိ ဟု ကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော် တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အ ဘယ့်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟု ဆိုလိုသ တည်း။" ( (မဿဲ ၂၇း ၄၅- ၄၆ ) )
ထိုကြောက်မက်ဖွယ်အချိန်နာရီတွင် လောကကြီးပေါ်တွင်ကျရောက်လာသောအမှောင်ည သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်ပထမဆုံးအချိန်ခွဲခွါသည့် ရုပ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မှီတွင် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်ကွဲကွါခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပါ။ သို့သော ယခုတွင် ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ထိုမှောင်မိုက်သောအချိန်နာရီတွင် သူသည် ငိုကြွေးလျက်ရှိသည်။
"အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။" ( (မဿဲ ၂၇း ၄၆ ) )
ဤသူကား အဘယ်သူနည်း။ သူသည် ယေရှုဖြစ်သည်။ ထာဝရနှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော် ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ် ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်ကွဲကွါသည့်အချိန်ကာလပင်ဖြစ်သည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ အဘယ့်ကြောင့် အော်ဟစ်သနည်း။
ရိုးစင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် သင့်အားရှင်းပြဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါသည်။ ဒါအံ့ဩစရာမဟုတ် ပါ။ ခရစ်တော်၏ဤစကားများသည် ရှင်းပြမရနိူင်ပါ။ Spurgeon လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် ဖြစ် ပါသည်။ သူက ဤစကားကိုပြောသည်။ အဘယ်သူမျှနားလည်မရနိူင်ပါဟု ဆိုသည်။ Spurgeon ကလည်း အောက်ပါအတိုင်းဆိုသည်။
[ပြောင်းလဲခြင်းခေါင်းဆောင်ကြီး] မာတင်လူသာသည် ဤကျမ်း ပိုဒ်ကိုလေ့လာရာတွင် ထိုင်တော်မူသည်။ တစ်နာရီပြီးတစ်နာရီ ဘုရားသခင်၏လူသည် ထိုင်နေလျက်နေသေးသည်။ သူ့ကိုစောင့် မျှော်သောသူသည် အခန်းထဲသို့လာပြီး ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သည်။ သူ၏သမ္မာကျမ်းစာခံယူမှုတွင် စုတ်ယူတော်မူသည်။ သူသည် ခြေ ကိုလည်းမရွေ့၊ လက်ကိုလည်း မရွေ့၊ စားလည်းမစား၊ သောက် လည်းမသောက်ပေ။ သို့သော် မျက်စိကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး ထိုင် တော်မူသည်။ ဤအံ့ဘွယ်စကားများကို တွေးတောတော်မူသည်။ "အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ့်ကြောင့် စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။" အချိန်နာရီများစွာကြာလာသောအခါ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သမျှသောအရာကို ဆုံးရှုံးသည်ဟု ဆိုရမည်။ သူ့ထိုင်ရာခုံကနေထ၍၊ "ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မူသောဘုရား သခင်" ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြားရသည်။ ထိုအကြောင်းကို အဘယ်သူမျှ နားမလည်ပါ။ သူသည် ၎င်း၏လမ်းကိုလိုက်သွား သည်။ ထိုစကားသည် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲသော်လည်း ကျွန်ုပ် သည် အလျှင်အမြန်အတည်ပြုပေးချင်သည်။ သို့သော် ထိုအလင်း ထဲတွင် မာတင်လူသာသည် စိတ်နှလုံး၌ ထိုအရာကို နားလည် သည်မှာ အံ့ဩစရာမရှိပါ။ လူသာသည် နက်ရှိုင်းသောစိတ်နှလုံး သားထဲတွင် သိမှတ်သည်ဟု ပြောလိုသည်။ ထိုသူသည် အလင်း ထဲသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်သဘောထားမရှိသောသူ တစ်ဦးသည် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တူသည်။ ထိုအရာထဲသို့ ကြည့်ရှု သည်။ သို့မဟုတ် ထိုလမ်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်သောသူတို့အ စိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤသို့ငိုကြွေးခြင်းအတွက် နိမ့် ကျသောနေရာသို့လာရန် မကြောက်ရွံ့ပေ။ [အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ့်ကြောင့် စွန့်ပစ်တော်မူသ နည်း။] ထိုအရာသည် နက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။အဘယ်သူမျှ မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် မရှင်းပြနိူင်တော့ပါ။
(C. H. Spurgeon, “လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ ဝမ်းနည်းစရာငိုကြွေး သံ,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, ၁၉၇၇၊ အတွဲ- XLVIII, စာမျက်နှာ ၅၁၇- ၅၁၈).
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်က သားတော်ဘုရားကို မည်သို့ "စွန့်ပစ်" နိူင်သည်ကို အပြည့်အဝနားလည်မရနိူင်ကြောင်း လူသာနှင့် Spurgeon ပြောသည်ကို ကျွန်ုပ်ထောက်ခံပါ သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအကြောင်းကို ကြိုးစားပြီး မရှင်းပြလိုပါ။ သို့သော် ထိုအကြောင်းနှင့်ပါတ် သက်ပြီး စဉ်းစားစရာလေးတော့ပြောချင်ပါသည်။
ခရစ်တော်က ဤနေရာတွင်ရှိသောလူများကဲ့သို့စကားပြောနေသည်။ သူသည် ဘုရား စင်စစ်ဖြစ်သည်။ လူသားစင်စစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှာ ဟိုက်ပိုတေးတစ်ယူနီယံဖြစ်ပါ သည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရား-လူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူသည် လူသားကဲ့သို့နေသည်။ လူ သားစစ်စစ်ကသာ ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်နိူင်သည်ဟု ဆိုရမည်။
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တုိ႔သည် ဘုရားသခင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သည်။ ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ကျွန်ုပ်တို့ နေရာယူပြီး အပြစ်အတွက် ဒုက္ခခံရသည်။
"ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွက် လေ၏။" ( (ဟေရှာယ ၅၃း ၄ ) )
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဦးမိဘများက အပြစ်ကိုကျူးလွန်ကြသောကြောင့် ထိုအပြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထံရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုအပြစ်ဖြင့်မွေးဖွါးလာသဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်ဝေး ကွာသည်။ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသည်။ အထီးကျန်စွာနေရသည်။ အထီးကျန်လျက် အသက်တာများ တွင် အသက်ရှင်နေကြရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သဘာ၀နှင့်ကျူးလွန်သောအပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်ခံရသည်။
"ထိုသူတို့သည် ဥာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍၊ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲ သောအားဖြင့် အလင်းမသိသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏အသက် နှင့်ကွာရှင်းလျက်ရှိကြ၏။" (( ဧဖက် ၄း ၁၈ ) )
ဘုရားသခင်ရှိရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အသက်တာတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကို အံ့ဩမသွားဘူးလား။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အဖြေရှိပါသည်။ သင့် စိတ်နှလုံးမှောင်အတိဖုံးလွှမ်းသောကြောင့် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှောင်မိုက်သဖြင့် ဘုရားသခင် သည် သင့်အသက်တာတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်မလာပါ။ ယင်းမှာ "ဘုရားသခင်၏အသက်နှင့်" ဝေးကွာသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။ ဂရိဖြစ်ပြီးကာလက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအ ရာကို အလေးအနက်ထားပါသည်။ သင်သည် တချိန်က ဘုရားသခင်ကို သိသည်ဟု မဆိုလို ပါ။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို မသိဘူးဟုဆိုပါသည်။ သင်သည် ယခုလည်းမသိပါ။ ခပ်တန်း တန်းဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်နှလုံး၏မှောင်မိုက်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (Dr. Fritz Rienecker, A Linguistic Key to the Greek New Testament, Zondervan, ၁၉၈၀၊ စာ- ၅၃၃)
သင်နှင့်ဘုရားသခင်ပေါင်းစည်းနိူင်ဖို့ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံမူ သည်။
"ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြစ်၍ ငါတို့ ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူ သောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက်အပြစ် များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။"( (၁ပေ ၃း ၁၈ ) )
"ငါတို့အား ဘုရားသခင်ထံဆောင်ယူဖို့" ယေရှုခရစ် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အလုံးစုံအတွက် ပေးဆပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ပေါင်းစည်းစေတော် မူခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် "ဝမ်းနည်း ခြင်း" "ဒုက္ခဝေသနာ" တို့ကို ကြုံတွေ့ရပါသည်။
သင်သည် မပြောင်းလဲသေးသောအပြစ်သားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီးထဲတွင် ကျန်နေခဲ့ရသည်။ သင်ခံစားရပေမည်။ တစ်ခုခုမှားနေသည့်သဏ္ဍန်ဖြစ်နေသည်။ လူငယ်များ သည် ၎င်းတို့အထီးကျန်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူ တို့အား ၎င်းတို့၏ငယ်ဘဝတွင် ပြောင်းလဲစေသည်။ သင်သည် အသက်ကြီးလာသောအခါ ဘာမျှမရှိသောအရာ၏နစ်မြှုပ်ခြင်းကို ခံစားလာရပါမည်။ အရက်၊ ကာမပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ငွေကြေး အရှုပ်အရှင်း၊ စသည်တို့ကိုလည်း ကြုံတွေ့လာနိူင်သည်။ ဤအရာတဲက တစ်စုံတစ်ခုကို အသုံး ပြုပြီး အထီးကျန်ဘဝက လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားလာသောအခါ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် အလွန် ပင် နောက်ကျနေပေလိမ့်မည်။
"ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မသိမမှတ်လိုသည်ဖြစ်၍၊ မ လော်က်ပတ်သောအမှုကို ပြုစေမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင် သည် သူတို့ကို မောဟလက်သို့အပ်လိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီ။"( (ရောမ ၁း ၁၈ ) )
ယနေ့နံနက်တွင် သင်သည် အသက်နုပျိုစင်အခါ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား စကား ပြောနေသည်။ ယင်းမှာ အထီးကျန်ခြင်း၏သင်၏ခံစားချက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သင့် အားခေါ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို စကားပြောသည်။ ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူသကဲ့သို့ ယေရှု၏စကားကို နားထောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်အရွယ်နုပျိုစင်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အားစကားပြောသည်မှာ ဤစကားများ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ကွဲကွာခြင်းကို ငြိမ်းအေးစေဖို့ သားတော်ဘုရားသည် ခမည်းတော်ဘုရားထံမှ ကွဲကွာခြင်းကို ခံစားခဲ့ရသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာပြီး သွားလျက်ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်အပြစ်ကိုဆပ်ပေးတော်မူသည်။ သင်သည် ဘုရားကို မေ့နေသည်။ ခရစ်တော်က သင့်အပြစ်ကိုပေးဆပ်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်းသွားခြင်း ကို မေ့လျော့နေသည်။ ခရစ်တော်က သင့်အပြစ်ကို ပေးဆပ်သည်။ သင်သည် ဘုရားကျောင်း လာသည်။ ဘုရားသခင်အကြောင်းကို မစဉ်းစားဘဲ စကားကိုသာ နှုတ်မွတ်သည်။ ခရစ်တော် က သင်၏အပြစ်ကိုဆပ်ပေးပြီ။ သင်၏ဘုရားမဲ့လုပ်ဆောင်သမျှသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ပေးဆပ်သည်။ အလွန်ပြင်းထန်သောပေးဆပ်မှုပေတည်း။
သူ့၏ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြီး သေခါနီးအထိရိုက်ကြသည်။ ခြေဖဝါးလက်ဖဝါးများကို သံမှိုနှင့်ရိုက်ကြပါသည်။ အမှောင်ကျရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် သူ့ အပေါ်သက်ရောက်လာပါသည်။
"ထာဝရဘုရားသည် သူ့ကို နှိပ်စက်ခြင်းငှါအလိုတော်ရှိ၍ နာစေ တော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကိုပူဇော်ပြီးမှ၊ အမျိုးအ နွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံခြင်း သို့ရောက်လိမ့်မည်။"( (ဟေရှာယ ၅၃း ၁၀ ) )
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အား သင်၏နေရာ၊ သင်၏အပြစ်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးပါသည်။ အဆိုးရွားဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ပေးထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး အမှောင်ထဲသို့ သွားစေပါသည်။ ထို့အပြင် ခရစ်တော်တည်းဟူသော သားတော်သည် သင်၏ အပြစ်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ထမ်းခဲ့ပါသည်။
ထိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာနှင့်အံ့ဩစရာမေးခွန်းဖြင့်အော်ဟစ်ခြင်းကို အဖြေပေးထားပါသည်။ ထို အဖြေကို တမန်တော်ရှင်ပေတရုက ဤသို့ပြောသည့်အချိန်တွင် ပေးထားသည်။
"ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍၊ ဝိ ညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူသည်ဖြစ် ၍၊ ငါတို့ကို ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ် တော်မူသောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက် အပြစ်ကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။" ( ၁ပေ ၃း ၁၈ ) )
သင်သည် ဘုရားကို စွန့်ပစ်သည်။ ယေရှုသည် စွန့်ပစ်ခံလျက် သင့်အပြစ်ကြွေးကိုဆပ် သည်။ သင်နေ့ရာတွင် အသေခံသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သံမှိုဖြင့် ရိုက်ထားခြင်းကိုခံရ သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်ကွဲပြားခြင်းနားသည်။
(“သူ့ဝေဒနာ” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ သင်းအုပ်က ပြင်ဆင်သည်။)
ခရစ်တော်၏စကားတွင်ရှိသော နက်နဲသောအရာလေးအကြောင်းကိုသာ အနည်းငယ် စဉ်းစားစေလိုသည်။
ယေရှုသည် သင့်အပြစ်အတွက်အသေခံပေးဆပ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်ထမြောက် ပြီးကောင်းကင်အရပ်တွင် ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင် ထိုင်နေတော်မူသည်ဟူ၍လည်း ကောင်း လုံလုံလောက်လောက်ကြားနာခဲ့ပြီးသားဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်မိသည်။ သင်၏မျှော်လင့် ချက်သည် ခရစ်တော်၌သာရှိသည်ကိုလည်း သိကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အကြောင်းမှာ ခိုင်မာသောမျှော်လင့်ချက် အခြားတွင်မရှိပါ။ သင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့ တိုက်ရိုက်လာပြီး သူ့ ကိုလက်ခံကာ ခရစ်တော်၏အသွေးဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရန် လုံလောက်စွာကြားသိကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်းသည် လောကနှင့်ထာဝရကာလတွင် အခြားနေရာတွင် မရှိ။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မဿဲ ၂၇း ၃၅- ၄၆။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Jack Ngann က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
"သူခံရသောနာကျင်မှု"၊ (Joseph Hart ၁၇၁၂-၁၇၆၈) ရေးစပ်သည်။
“"အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။"(မဿဲ ၂၇း ၄၆ )
၁။	ပထမအချက်၊ ဤယေရှုကား အဘယ်သူနည်း။ ယောဟန် ၃း ၁၆၊ ၁၇း ၅၊ ၁၀း ၃၀၊ ၁း ၁- ၃၊ ၁၄၊ လုကာ ၂၃း ၃၄၊ မဿဲ ၂၇း ၄၅- ၄၆။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ အဘယ့်ကြောင့် အော်ဟစ်သနည်း။ ဟေရှာယ ၅၃း ၄၊ ဧဖက် ၄း ၁၈၊ ၁ပေ ၃း ၁၈ ၊ ရောမ ၁း ၂၈၊ ဟေရှာယ ၅၃း ၁၀။